Ceebaha ka dhacay doorashada gobolada ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya!!! | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	Ceebaha ka dhacay doorashada gobolada ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya!!!
Posted on November 20, 2016 by wacyigelin	Fadeexado fara badan ayaa ka dhacay doorashooyinka aqalka hoose ee Galmudug ee lagu qabtay magaalada Cadaado. Haddaba beel kasta oo ka soo qayb gashay doorashada waxaa ka jirta dhexdeeda cabasho ku aadan in lays hendeday, lays xiray, hub iyo caga juglayn lasysu adeegsaday, iyo weliba in dad jidka laga soo aruuriyay lagu tilmaamay inay yihiin kuwa metela beelaha si loo helo dad raacsan musharaxa taagan markaa ee tunka wayn si looga badiyo kan kale waaba hadii loo ogolaado in kan lala tartamayo meesha uu yimaadee. Haddaba waxaan ku bilaabaynaa beesha Murusade oo khilaafaad fara badan uu hareeereeyay doorashada musharaxiintooda. Doorashada musharixiinta Murusade khilaaf keliya kuma ekaan ee waxaab ku daatay dhiig. Waxaa mid ka mid ah ergooyinka lagu dilay ilinka laga galo meesha ay doorashadu ka dheceeysay iyadoo la sheegay in ay dileen ciidamada AMISOM oo ay soo direen rag musharixiin ah oo sida la leeyahy laaluush soo siiyay si ay uga takhalusaan ninkan oo carqalad ku ahaa iyaga kuna eedaynayey inaanay metlin beesha balse ay xoog ku raadinayaan kursiga beesha.
Ragga lagu tuhmayo inay ka danbeeyeen dilka ninkan ayaa sidoo kale loogu tuhmayaa inay horay u dileen nabaddoonkii lafta ay ka dhasheen. Waxaa la sooo werinayaa in ninkii ka danbeeyay dilkii nabaddoon Cabdi Macallin oo lagu dilay masaajid gudihiis sanadkii 2015, bishii Ramadaan oo ku aadanay labadii Juulaay inuu hadana masuul ka ahaa dilka ninkan ergada ah. Nabaddoonka oo aad uga soo horjeeday sida wax u socdaan ayaa Xassan Macallin u arkayey inuu ku noqon karey caqabad doorashooyinka 2016. Kadib khilaaf ka dhacay Cadaado ayaa nabadoonku kasoo carooday oo diiday inuu howsha musuqa iyo wax isdaba marinta uu wax ka wado. Sidoo kale nabaddoonka oo kasbaday taageero badan ayuu Xassan Macallin u arkay qatar ku soo fool leh asaga keeni kartana inaanu dib usoo noqonin. Taas ayaa keentay in Xassan Macallin iyo koox ay wada shaqaystaan ay soo maleegaan dilka nabaddoonka. Xassan Macallin ayaa la leeyahay waa uu ka danbeeyay dilka Cadaado ka dhacay maalin dhoweeyd. Dad aqoon fog u leh Xassan Macallin ayaa sheegay in uu yahay nin aaminsan inuu weligii ku fadhiyo kursiga Baarlamaanka ay ku leeyihiin ABAKAR cidi ka hortimaadana uu u adeegsado ama lacag amaba uu ka takhaluso oo uu dilo hadii ay kusii adkeeysato mucaaradnimada.
Baaritaano fara badan oo aan sameeynay ayaa tibaaxaya in ninkan iyo xulufo la shaqeeysa ay dad aan metelin beesha ABAKAR ay kasoo aruuriyeen xamar intii ka hortimidna ay handadeen. Ninka la dilay oo ahaa nin ergada ka mid ah ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan ninka is sharaxayey oo lagu magacaabo Xassan Macaallin taasina keentay in Xassan Macallin uu heshiis la galo ciidamada Burundi si looga takhaluso ninkaas. Waxaa taa cadeey dhab ah u ah in ninkan oo aan wax hub ah wadanin la xabadeeyay. Qofki caqli leh waa garan karaa sababta keliya ee keeni karta in la toogto qof aan hub wadanin gaar ahaan meel fagaare ah oo doorasho ka socoto.
Haddaba taas waa wixi ka dhacay Cadaado ee ku aadan lafta Abakar dhexdeeda iyadoo kursigii dhiigga loo daadiyay laba jeer uu ku fadhiyo maantay Xassan Macallin oo ku iibsada kursiga dhiigga beesha iyo lacag uu siiyay kuwo wax magarta ah amaba baahi heeyso.
Halkan ka daawo mid ka mid ah musharixiinti beesha Abakar oo ka hadlaya Xassan Macallin sida uu wax u dhigay.
Beesha Murusade oo fadeexado hareereeyeen doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa meesha ka dhacay ceebo fara badan oo dil ka mid yahay, afduub ka mid yahay, handaad iyo weliba in xoog lagu soo bixiyo qaar musharixiinta iyo ergooyinka ka mid ahaa. Nin kamid ah Ergada oo lagu dilay Cadaado
Bal aan haddan u gudubno lafaha kale ee Murusade. Waxaa sidoo kale ceeb wayn ka dhacday doorashadii xubinta ay lahaayeen Habar Ceeno. Sadar muuqda su’aal ka dhan ayay tiraahdaa ee meeshan ayaa ka arki kartaa wixi dhacay.
Laakiin marki aad eegto labada lafood ee isla beesha ah waxaad dareemaysaaa in ugu yaraan dadka kasoo jeeda Habar Ceeno ay hadli karaan oo aanay qabin cabsi ah in la dilo. Laakiin Abakar cid hadli karta waa laga la’yahay maxaa yeelay qof walba waxay ogtay in Xassan Macallin aanay dhib ku haynin in dilo hal qof ama bqoqol qof toona markii ay u timaado kursiga oo lagu soo fara geliyo. Haddaba hoos ka fiirso waxa General Gaafoow ka sameeyay Cadaado.
TALIYAHA SIRDOONKA IYO NABAD SUGIDA QARANKA JENERAL GAAFOW OO CADAADO LAGU SOO DHAWEEYEY 10 11 2016
Cidanka General Gaafow oo Af duubtay Odayashii dorashada Cadaado
Muqaal Sir ah fadeexada doorashada cadaado ay ka sameeyen Mustaf Dhuxulow iyo Gaafow
Murusade keliya maaha ee beel kasta ayaa arimaha noocan ah ka dhex dhaceen oo waa tii la afduuba gabar ka qay geli lahayd doorashada si looga baajiyo ninkii la tartmaayayna uu soo boxo. Hoos ka eeg sida wax u dhaceeen. Taasi waxay ka dhex dhacday beesha Wacaysle Abgaal gaar ahaa lafta hoose ee Cali Gaaf.
Gabadh Cadaado kasharxan oo Jaakada Xabadaha celisa so xidhatay
Kuma ekeeyn arimaha noocan ah cadaado ee waxay ka dheceen Baydhabo, Kismaayo, Buntland iyo weliba Somaliland.
BAYDHABO BAL AAN EEGNO!!!
kISMAAYO MAXAA KA DHACAY!!!
Kismaayo iyada waxayba gaartay in la joojiyo doorashada sababo la xiriira is dabamarin iyo xafiiltan ka dhexeeya xisbiga dalka ka taliya ee lagu magacaabo Damul-jadiid iyo kooxda qabiilka ku salaysan ee ay wada hogaamiyaan Axmed Madoobe, Gaas, iyo Cumar C/rashiid haddana ka tala qaata safiirka Soomaaliya u jooga Soomaaliya oo wada dano Iimaaraadku ka leeyihiin Soomaaliya. Intaa keliya maaha ee Iimaaraadku waxa ay xafiiltan ku jiraan Turkiga iyagoo aad uga maseeyrsan Turkiga joogitaankiisa ee Soomaaliya. Waxaa iyaduna xusid mudan in dagaalka Turkiga lagula jiro aan ku ekeeyn Iimaaraadka ee ay dowlado waa wayn oo reer galbeed ah ay qayb ka yihiin.
Iimaaraadku waxa ay wadaan qorshe ah inay ka faaiidaystaan xurgufta hore ee ka dhextaagan labadan qabiil ee waawayn iyagoo hadda tusinaya kuwa ay dan wadaagga yihiin inay dalka sidii ay u qabsan lahaayeen ay kala shaqeeynayaan. Taas ayaa ka indha tirtay inay fahmaan dhibta Iimaaraadku uu Soomaaliya la doonayo oo ah in meesha laga saaro Turkiga oo aan ognahay waxa uu u qabtay Soomaaliya iyadoo carabi aanay dan ka leheeyn marka laga reego dadka culimada ah oo aad isu xilqaamay. Haddaba Soomaalidu yaanay eegin dagaalka dhexdooda ah ee ha eegaano maxaa carabi faaiido u haysaa Soomalida mase geli kartaa Booska uu Turkigu galay.
PUNTLAND WAA SIDEE IYADU!!!
Tafaasiil fara badan ayaan soo uruurin doonaa oo aan idiin soo gudbin doonaa ee la socda.
Filed under: Uncategorized « Somalia The Forgotten Story Al Jazeera World الشيخ ياسر الحبيب ــ متصل مصري إذا أجبت كل أسئلتي تشيعت الأن »